`အВґတယ်လို့ပဲပြောပြော။ — MYSTERY ZILLION
January 2010 edited January 2010 in About Forum
အကိုတို့ရေ.... ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ post ရဲ့ ဘေးနားမှာ Attachment(s) , enjoy ,good? တို့ ကြယ်ငါးလုံး တို့ ပေါ်နေတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ တကယ်မသိလို့ပါ။
can you tell me detail with screenshoot ? ဘာပြောလဲဆိုတာ မရှင်းဘူး။ ဘယ်နေရာမှာပြောတာလဲမသိဘူး။
အနီရောင်ကွင်းထားတဲ့ Logo တွေကိုပြောတာပါ။
Attachment not found. ကတော့ Tag ထည့်ထားတယ်လို့ပြောတာပါ။ Tags for this Thread ဆိုတာက thread ရဲ့အောက်ဆုံးမှာပါပါတယ်။Attachment not found. ကတော့ attachment တွဲထားတာ ရှိတယ်လို့ပြောတာပါ။ Attachment not found. ကတော့ ဖျက်ထားတာ ရှိတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ကြယ်တွေကတော့ rate ပေါ့။ Rate This Thread ဆိုတာ thread အပေါ်ဆုံးမှာပါပြီး အဲဒီကနေ post ရဲ့rate ကို ပေးလို့ရပါတယ်။